Mihamahazo Vahana ny Fihetsiketsehana ao Makedonia Rehefa Nambara Ny Hisian’ny Fifampiraharahana Ara-Politika Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2016 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny Български, русский, Italiano, Español, English
Mihoatra ny 10.000 ny olona nihazo ny kianja lehibe ao Skopje, Makedonia, tamin'ny alatsinainy hanohitra ny famindram-pon'ny Filoha amin'ireo politisiana ambony. Saripikan'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy amin'ny rakitsary mandrakitra ny andro fahafiton'ny fihetsiketseham-panoherana.
Mihalalina ny krizy politika, nanenika ny lalan'i Skopje, Bitola, Veles ary ny tanàna hafa manerana ny firenena hanehoany ny tsy fahafaliany ny olom-pirenen'i Makedonia.
An'aliny ireo Makedoniana niaraka nivory tany amin'ny tanàna isan-karazany isan'andro tamin'ny 6 ora hariva hatramin'ny nanomezan'ny filoha famindram-po ireo manampahefanan'ny governemanta voampanga ho nanao kolikoly sy fihoaram-pahefana tao amin'ny fitsarana. Ary raha mbola tsy tapitra ny herinandro faharoan'ny fihetsiketseham-panoherana, dia toa mihamahazo vahana ny hetsika eny ifotony #protestiram (“Manohitra aho!”).
Tamin'ny 12 Avrily, nanambara ny filoha Gjorge Ivanov fa nahitatra ny tsimatimanota ara-pitsarana ka nomena izany ireo politisiana malaza mihoatra ny 50 sy ireo akamany izay eo ambany famotoran'ny Biraon'ny Mpitsara Manokana noho ny fiahiahiana fanaovana kolikoly, fihainoana tsy ara-dalàna ny antso an-tariby, hosoka amin'ny fifidianana, fihoaram-pahefana ary hatramin'ny fanafenana raharaham-pamonoan'olona aza. Ny lazaina ho heloka bevava moa dia nipongatra avy ao amin'ny fihainoana antso an-tariby niporitsaka tao amin'ny lehiben'ny antoko politikan'ny fanoherana, Zoran Zaev, tamin'ny herintaona. Navoakan'i Zaev ary fa raketina amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny resaka an-taribin'olona mihoatra ny 20.000 ao Makedonia noho ny baiko nomen'ny Praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski.
Ny androtr'io ihany koa no nanambarana ny famindram-po, nidina an-dalambe ny Makedoniana ary nanohy izany hatrany isan'andro nanomboka hatreo. Niangona teo anoloan'ny Biraon'ny Mpitsara Manokana ny mpanao fihetsiketsehana ho fanohanana ny asan'izy ireo, ary avy eo nifindra tany afovoan-tanàna nankany amin'ny lazaina ho Biraon'ny Vahoaka an'ny filoha Makedoniana (norobain'ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny andro faharoan'ny hetsi-panoherana), ary avy eo nankany amin'ny Lapan'ny Parlemanta sy ny Lapan'ny governemanta.
Polisy misahana ny rotaka miambina ny lapan'ny Governemanta ao Skopje, Makedonia. Saripikan'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy amin'ny rakitsarin'ny andro fahaefatry ny fihetsiketsehana.
Mifanindran-dalana amin'ny fihetsiketsehana ao Skopje, an'arivony maro ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana mivory isan'andro any amin'ireo tanàna Makedoniana hafa, tahaka an'i Bitola, Kumanovo, Strumica, Shtip ary Veles. Nanomboka nanao fihetsiketsehana ihany koa ireo zanaka am-pielezana any New York sy Washington.
Tamin'ny andro fahaefatry ny fihetsiketsehana, tamin'ny 15 Avrily, raha nahazo ny faritra manodidina ny lapan'ny governemanta ny mpanao fihetsiketsehana tao Skopje, nosakanan'ny polisy ny lalan-dry zareo tamin'ny voalohany. Rehefa tafavory maro anefa ny vahoaka dia nomena alalana hibodo ny faritra iray manontolo anoloan'ilay Lapa manana endrika Baroque vaovao ihany ny olom-pirenena.
Tamin'ny Asabotsy 16 Avrily, notombanan'ny mpikarakara fa olona mihoatra ny 10.000 no nidina an-dalambe tao anatin'ny hetsika milamina tsy misy herisetra. Niezaka ny hanaisotra hatrany ireo mpihantsy hiala an-daharana ireo andrimason'olompirenena tsy ofisialy. Na teo aza izany dia nisy olona iray tondroin'ny mpanao fihetsiketsehana ho mpihantsy (olona ampiasain'ny manampahefana na ireo manao malefaka amin'ny manampahefana manao izay isian'ny valibontana mahery vaika avy amin'ny polisy) no nidaroka tanoravavy iray teo am-piezahana hitoraka loko tamin'ny Lohalambon'ny Fandresena, anisan'ny tetikasan'ny governemanta naorina vao haingana hanome endrika vaovao ny renivohitra antsoina hoe ‘Skopje 2014.’ Ny halakin'ny hetsika nataon'ny andrimason'olompirenena no nahafahana nisoroka ny toe-javatra tsy hibolisatra.
Tamin'ny andro fahadimy, nanala ny tandahatra teo akaikin'ny lapan'ny governemanta ny polisy rehefa nahatratra 10.000 ireo olona tafavory. Saripikan'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy amin'ny rakitsarin'ny andro fahadimin'ny fihetsiketsehana.
Tamin'ny alahady maraina, nanambara ireo mpikarakara ny fihetsiketseham-panoherana ao Skopje, vondrona mpikatroka tsy ofisialy ahitana ireo mpikamban'ny firaisamonim-pirenena, fa natao hanaovana fanombanana sy fieritreretana io andro io. Tsy nanakana ireo andian'olompirenena vitsy kokoa hitety ny arabe izany ka nametrahan'izy ireo marika fanohanana ny hetsi-panoherana amin'ny sasantsasany amin'ireo tsangambaton'ny tetikasa Skopje 2014. Tsy nitoetoe-poana ihany koa ireo olompirenena tany amin'ny tanàna hafa. Nitohy ny fihetsiketsehana tao Bitola, izay mbola namakian'ny mpanao fihetsiketsehana hatrany ny fefy tadin'ny polisy (saingy tsy niteraka herisetra izany toe-javatra izany), ary maro ireo tanàna vaovao “nipoaka,” ary ny tena niavaka dia ny tao Veles.
Tamin'ny alatsinainy 18 Avrily, nitohy ny hetsika ary nihamaro ny mpanatrika. Tamin'ity indray mitoraka ity, ankoatra ny tao amin'ny Parlemanta, ny kianja lehibe ary ny lapan'ny governemanta, nizotra nankany amin'ny minisiteran'ny kolontsaina ny mpanao fihetsiketsehana ary nitoraka loko azy. Ny Minisiteran'ny Kolontsaina no andrim-panjakana lehibe indrindra tafiditra tamin'ny fanatontosana ny tetikasam-pananganana Skopje 2014.
Nanafoana ny fihetsiketsehana nataony ny mpanohitra-hetsika, nalamin'ny vondrona iray antsoina hoe GDOM (Hetsik'Olompirenena Ho Fiarovana an'i Makedonia) izay tsy miafina amin'ny fitiavany ny antoko mpitondra eo amin'ny ilany ankavanana VMRO-DPMNE ny mpitarika ao aminy. Araka ny fanazavan'ny vondrona, efa tratran'izy ireo ny tanjona nokendreny — dia ny hisian'ny fifidianana amin'ny 5 Jona. Nanasonia ny fanapahan-kevitra tamin'ny fifanarahan'i Przino amin'ny fomba ara-dalàna tamin'ny asabotsy ny filohan'ny Parlemanta, teo ambany fanaraha-mason'ny Vondrona Eoropeana sy i Etazonia tamin'ny 2015 hamaranana ny krizy politika misy ao amin'ny firenena (na dia tsy hita aza ny fepetra nasongadina tamin'io fifanarahana io hisian'ny fifidianana tsy mitongilana). Efa nilaza ny mpanohitra fa hanao ankivy ny fifidianana.
Mpanao fihetsiketsehana miampita ny Lohalambon'ny Fandresena, ao anisan'ilay tetikasa voatsikera fatratra antsoina hoe ‘Skopje 2014′ hanomezana fandaminana vaovao indray ny renivohitra. Saripikan'i Vancho Dzambaski (CC BY-SA) avy amin'ny rakitsarin'ny andro fahaenin'ny fihetsiketsehana.
Saingy nanambara ankehitriny ny GDOM fa hanatontosa ny “renin'ny fihetsiketsehana rehetra” amin'ny Alakamisy ho fanohanana ny governemanta sy ny antoko mitondra. Nihanafana ny resaka an-tserasera. Ohatra amin'izany, nanoratra amim-pampitahorana momba ny hetsika “manohitra aho!” ao amin'ny Facebook amin'ny fampiasana voambolana manavakavaka “Sorosoids” sy lahateny fankahalana ireo “mpamadika” sy ny LGBTI ao amin'ny fanehoan-keviny nanaraka izany ny talen'ny arisivam-panjakana:
Nandranitra ny fahatezeram-bahoaka ianareo. Hivoaka an-dalambe izahay!
Tsara kokoa mipetraka ao an-trano ry Sorosoids.
Nanasa ireo mpitarika amin'ny antoko politika efatra lehibe indrindra ao Makedonia, izay kandidà amin'ny fidirana ao aminy, ny Vondrona Eoropeana, hanatontosana fifampiraharahana vaovao ao Vienna amin'ny 22 Avrily. Na dia tsy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy aza izy, dia nilaza ny mpitondratenin'ny Vondrona Eoropeana Maja Kocijancic fa manantena hihaona haingana amin'ny mpitarika ny antoko efatra hiresaka amin'ny fivoaran'ny krizy vao haingana ny Komiseran'ny Fanitarana ny Vondrona Eoropeana Johannes Hahn.
Ho fanampin'ireo mpitarika efatra ireo, nilaza i Kocijancic fa eo am-pifandraisana amin'ireo mpiara-miombon'antoka goavana tahaka an'i Etazonia ny Komisera Hahn hiresaka ny fomba hamahana ny krizy sy hiantohana fa hanohy amin'ny fametrahana ny fifanarahan'i Przino ireo mpitarika ireo. Nanambara ny mpitarika ny fanoherana Zaev fa mialoha ny handehanana any amin'ireo fifampiraharahana vaovao atao ao Vienna izao, dia haka hevitra any amin'ny firaisamonim-pirenena, ka tafiditra amin'ireny ireo vondrona manao ny hetsi-panoherana ny antoko SDSM misy azy.